[solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem]
1 [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 20th September 2009, 5:15 pm
sata hard disk ကို စက်မပိက်ဘဲ တက်လို ့ရပါသလား...
2 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 20th September 2009, 5:33 pm
May be 80% sure
3 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 20th September 2009, 8:03 pm
ရတယ်လို ့တော့ပြောသံကြားတယ်ဗျ........စမ်းတော့မစမ်းဘူး တစ်ကြိမ်တစ်လေဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်........
4 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 21st September 2009, 5:21 am
စိတ်ချရအောင်လို့တော့ စက်ပိတ်ပြီးမှတပ်ပါလား [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 21st September 2009, 2:30 pm
6 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 21st September 2009, 5:14 pm
SATA က Hot swappable ရပါတယ် .. ဒါကြောင့် မပိတ်ပဲနဲ့ တပ်လို့ရပါတယ် .... အကောင်းဆုံးကတော့ အန္တရယ် ကင်း ဘေးရှင်း အောင် ပိတ်ပြီးပဲ တပ် တာပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် ဗျာ ..
7 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 25th September 2009, 3:10 pm
တပ်တာကတော့ စက်ပိတ်ပြီးမှတပ်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။ စက်ကို run ထားတုန်းမှာဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ devmgmt.msc ကနေ ကိုယ်ဖြုတ်ချင်တဲ့ CD, DVD Drive, Hard Disk ကို Disable လုပ်ပြီးမှ ဖြုတ်လို့ရပါတယ်။
တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တော့ အနော်နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးနော် . လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ . အခန့်မသင့်လို့ဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံပဲ နော်... ပြောပြီးသား [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 10th October 2009, 2:12 pm
တပ်လို့ရတယ်ဗျ ဒါပေမယ့်မလုပ်နဲ့ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ ဟီးပျက်သွားတယ်။
9 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 22nd January 2010, 4:48 pm
SATA ကတော့ စက်မပိတ်ပဲ တပ်လို့ ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျား... IDE ကတော့ မရပါဘူးခင်ဗျား... စက် run ထားတုန်း ဖြုတ်လိုက်မိရင် စက်ကဟမ်းသွားပါတယ်ခင်ဗျား... SATA ကတော့ ရပါခင်ဗျား... ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ပြောပြတာပါခင်ဗျား... အမှားပါလည်း ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်နော်... :cheer
10 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 29th January 2010, 8:40 am
Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ပဲ တတ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စက်မပိတ်ပဲနဲ့ တော့ ပြန်မဖြုတ်ပါနဲ့ဗျာ။ (ခင်ဗျားကိုယ်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ် စီးနေမယ်၊ အောက်ခံကြမ်းပြင်နဲ့ ထိနေမေယ်ဆိုရင်တော့ Ground ကျပြီး ခင်ဗျား ရဲ့ hard disk လစ်သွားနိုင်ပါတယ်)
11 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 13th June 2010, 11:50 am
[You must be registered and logged in to see this image.] ရတယ် အကိုရေ ဘာမှဖြစ်ဖူးဗျ ကျွန်တော်လုပ်ကြည်.တာတော. ရတယ် ဖြုတ်လို.လဲရတယ် တပ်လို.လဲရတယ်နော် အကို ကျွန်တော် လုပ်ကြည်.ပြီးပြီ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
12 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 14th July 2010, 9:15 am
SATA က Hot Swap ပါဒါပေမဲ့ တပ်တဲ့အခါ Data cable ကိုအရင်တပ်ရပါတယ်ပြီးရင် Power ကိုတပ်ရပါတယ် မှန်မှန်ကန်ကန်တပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး
13 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 16th July 2010, 6:30 pm
ထိခိုက်ဆုံး ရူးံးမူတွေ ကို အလကား နေရင်
မဖြစ်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ အကို
တခုလောက်ပဲ ၀င်ဖောကြည့်မယ် hardware ပစ္စည်လေးတွေ ကို
ကိုင်တွယ် တက်ဆင်ကြတော့မယ် ဆိုရင်
စက်ကို ပိတ်ထား တာ ပို ပီး တော့ ဘေးကင်းလုံခြုံစေပါတယ် အကို ရေ.........
14 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem] on 16th July 2010, 7:26 pm
တပ်လို့ရပါတယ်အစ်ကိုတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုယ်တပ်လိုက်တဲ့ sata အမျိုးအစား harddisk က
ကိုယ့်တပ်ဆင်မှုဝင်လား(auto detect (ဖြစ်)(မဖြစ်)ကိုတော့ bios ကို ကွန်ပျူတာစစဖွင့်ချင်း posts
လုပ်ဆောင်မှုစလုပ်တဲ့အခါ del ကီးနှိပ်(တစ်ချို့ဘုတ်တွေဆို f10(ရှားပါတယ်)အဲ့အပိုင်းကိုဝင်ပြီးကိုတပ်လိုက်သော sata hardisk က
auto detect ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ကြည့်ပေးပါအစ်ကိုတော်
ပြီးတော့ sata hardisk ဆိုတာက IDE hardisk ထက်3ဆမြန်ပါတယ်။သူ့ data cable က serial လုပ်ဆောင်ပေးတော့ IDE cable လို parallel လုပ်ဆောင်မှုထက်မြန်ပါတယ်။sata harddisk ကိုပိုကြိုက်
နှစ်သက်မိပါတယ်။လူကြိုက်များဆုံး company ကတော့ seagate ပေါ့ဗျာ။
120 GB (Seagate) 7200 rpm, IDE
120 GB (Seagate) 7200 rpm, SATA
(Maxtor, Seagate, Samsung) မှာ သက်ဆိုင်ရာ Hard Disk ထုတ် (Company) များဖြစ်သည်။(7200 rpm) မှာ (Hard Disk) လည်ပတ်နူန်းဖြစ်သည်။
IDE(IntegratedDevice Electronics ) နှင့် SATA(Serial ATA) သည်(Hard
Disk)အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။(SATA- Hard Disk) သည် (IDE - Hard Disk) ထက်
ပိုမိုလျှင်မြန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။(Company) လိုက်စျေးနူန်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။လူကြိိုက်များဆုံးမှာ ((SATA- Hard
Disk)) ဖြစ်ပါသည်။အရင်တုန်းကတော့ (SCSI - Hard Disk) သုံးကြပါသည်။
15 Re: [solved]Sata Harddisk ကို စက်မပိတ်ဘဲ တက်လိုရပါသလား? [Problem]